लन्च भयो स्प्लिट सिट सहितको सबैभन्दा सस्तो बजाज पल्सर १२५ | Automotive News Nepal
लन्च भयो स्प्लिट सिट सहितको सबैभन्दा सस्तो बजाज पल्सर १२५ ५ असार, २०७७
बजाज अटोले सबैभन्दा सस्तो पल्सर १२५ नयाँ स्प्लिट सिट भेरिएन्ट लन्च गरेको छ । सो बाइकको मूल्य ७९ हजार ०९१ भारु तोकिएको छ । सो बाइकको फ्रन्टमा डिस्क ब्रेक स्ट्यान्डर्ड समावेश गरेको छ । सिंगल सिट भएको पल्सर १२५ को मूल्य डिस्क ब्रेक भेरिएन्टको भन्दा ३ हजार ५९७ र ड्रम ब्रेक भेरिएन्टको भन्दा ८ हजार ०९६ भारु महँगो रहेको छ ।
बजाज पल्सर १२५ मा नयाँ स्प्लिट सिट, स्प्लिट ग्र्याब रेल र स्पोर्टी बेली प्यान समावेश गरिएको छ । सो बाइक ३ रङ ब्ल्याक रेड, ब्ल्याक सिल्भर र मेट ब्ल्याकको साथमा नियोन ग्रीनमा उपलब्ध रहेको छ ।
नयाँ पल्सर १२५ स्प्लिट सिट बाइक ट्वीन पायलट ल्याम्पको साथमा वुल्फ आई हेडल्याम्प क्लस्टर र इन्फिनिटी ट्वीन स्ट्रिप एलईडी टेलल्याम्पको साथमा उपलब्ध रहेको छ । यसको फ्युल ट्यांक र रियर काउलमा ३डी लोगो समावेश गरेको छ । बाइकमा क्लिप अन ह्यान्डलबार रहेको छ । अलोय ह्वीलमा बाइकको रङका आधारमा नियोन हाइलाइट समावेश गरेको छ ।
नयाँ पल्सर १२५ स्प्लिट सीटमा स्ट्यान्डर्ड पल्सर १२५ इन्जिन समावेश गरिएको छ । बीएस६ कम्प्लायन्ट १२५ सीसीको सो इन्जिनले ८५०० आरपीएमा ११.६ बीएचपीको पावर र ६५०० आरपीएममा १०.८ एनएमको टर्क जेनेरेट गर्छ । सो इन्जिनमा ५ स्पिड गियरबक्स समावेश गरेको छ ।
नयाँ पल्सर १२५को फ्रन्टमा २४० एमएम डिस्क र रियरमा १३० एमएम ड्रम ब्रेक समावेश गरेको छ । बाइकको ह्वील १७ इन्चको रहेको छ । सो बाइकको फ्रन्टमा ३१ एमएम टेलेस्कोपिक फोक्र्स र रियरमा ट्वीन ग्याँस चाज्र्ड शक एब्जर्बर्स सस्पेन्सन रहेको छ ।
बजाजको सो नयाँ बाइकको प्रतिस्पर्धा होन्डा एसपी १२५ र हिरो ग्ल्यामर जस्ता बाइकसँग हुनेछ ।
चर्चामा पल्सर १२५ स्प्लिट सिट : यस्ता छन् सेगमेन्ट फर्स्ट फिचर
पल्सरले हालै भारतीय बजारमा १२५ सीसी सेगमेन्टमा स्प्लिट सिट सहितको बाइक सार्वजनिक...
हिरो एक्सट्रिम १६० आर, पल्सर एनएस १६० र अपाचे आरटीआर १६० ४भी कुन उत्कृष्ट
हिरो मोटोकर्पले हिरो एक्सट्रिम १६०आर लन्च गरेको छ । हिरो एक्सट्रिम १६०आर १६० सीस...
कहिले आउला नेपालमा पल्सर १२५ स्प्लिट सिट भेरिएन्ट ? कति पर्ला मूल्य ?
भारतमा हालै बजाजले पल्सर १२५ को स्प्लिट सिट भेरिएन्ट लन्च गरेको छ । बजाज पल्सर...
रमणीय स्थानमा ड्राइभिङ सिक्न भेइकल एकेडेमी एन्ड रिसर्च सेन्टर (भिडियो सहित)
राजधानीको सतुंगल, गुर्जुधारामा मुख्य सडकदेखि नजिकै रहेको भेइकल एकेडेमी एन्ड रिसर...
भाडाका ट्याक्सी चलाउन दिन संसदीय समितिद्वारा सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं - प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास समितिले सरकारलाई तत्काल सार्वजनिक याता...
काठमाडौंका सडकमा टेस्ला कार : सामाजिक सञ्जालमा चर्चा